sapphire glass ကို စိန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ Xiaomi Mi9durability test – Myanmar Mobile App
Posted on March 15, 2019 March 15, 2019 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)	Comment(0)
ဈေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းမှာ ညီမျှအောင်လုပ်ဆောင်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုရင် Xiaomi ကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ အဲဒီစိတ်ထားလေးက စမတ်ဖုန်းအတော်များများမှာ စီးဆင်းနေပြီးတော့ တရုတ်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးနိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ခတ်မှာ Xiaomi, OPPO, Vivo နဲ့ အဲလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေဆီက ထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေက သူတို့ကို အနည်းငယ်ဖြစ်ဖြစ် အရှက်ရအောင်လုပ်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ Mi9flagship မှာတော့ Xiaomi ဟာ main camera အတွက် “sapphire glass” သုံးပေးထားတယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။ ဒါဟာ JerryRigEverything အတွက်တော့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းငယ်လေးတစ်ခုအတွက် ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကို ဘာကြောင့်သုံးရမှာလဲ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကင်မရာတွေက ဖုန်းရဲ့ကိုယ်ထည်ကနေအပြင်ကို ထွက်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖုန်းတွေကို စားပွဲပေါ်တင်ထားမယ်ဆိုရင် အနည်းနဲ့အများတော့ ထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ခြစ်ရာပွန်းရာတွေဟာ Lens ထဲကို အလင်းဝင်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ကို ကြံ့ခိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားတယ်လို့ မြင်ရမှာပါ။ ဆိုလိုတာက ကင်မရာရဲ့ အရည်အသွေးကို ကာကွယ်ချင်တာပေ့ါ။
Xiaomi ဟာ ကင်မရာအတွက် sapphire ကို ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Apple လည်း သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ JerryRigEverything အနေနဲ့ sapphire သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေကို စမ်းသပ်ပြခဲ့တာလည်း မနည်းတော့ပါဘူး။ Xiaomi အလှည့်မှ ထူးပြီးလုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်တော့ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုအရဆိုရင် Xiaomi ရဲ့ “sapphire glass” ဟာ sapphire ဆိုတာထက် ဖန်သားပိုဆန်ပါတယ်။ level6မှာ အစင်းရာထင်သွားပြီးတော့ level7ကို မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် sapphire နဲ့ glass ကို ရောနှောထားတယ်ဆိုတာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လုံးဝလိမ်ညာခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
သတင်းကောင်းကတော့ Xiaomi Mi9ဟာ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်ပြီးတာ့ ကြံ့ခိုင်မှုအရှိဆုံးလို့လည်း ပြောရမှာပါ။ သူ့ဈေးတန်းနဲ့ပေ့ါ။ အဲဒီဈေးမှာကို အချက်အလက်အမြင့်တွေလည်း သုံးပေးထားပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့ ဒီနေ့ခေတ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းတွေလိုပဲ headphone jack ဖြုတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် microSD storage ကိုတော့ အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။
ဈေးသကျသာပွီး အရညျအသှေးနဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုပိုငျးမှာ ညီမြှအောငျလုပျဆောငျပေးထားတဲ့လုပျငနျးတဈခုဆိုရငျ Xiaomi ကို ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ အဲဒီစိတျထားလေးက စမတျဖုနျးအတျောမြားမြားမှာ စီးဆငျးနပွေီးတော့ တရုတျစမတျဖုနျးဈေးကှကျကိုလညျး လှမျးမိုးနိုငျအောငျ ကူညီပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီနခေ့တျမှာ Xiaomi, OPPO, Vivo နဲ့ အဲလိုမြိုးလုပျငနျးတှဆေီက ထှကျလာတဲ့ဖုနျးတှကေ သူတို့ကို အနညျးငယျဖွဈဖွဈ အရှကျရအောငျလုပျနသေလိုဖွဈနပေါတယျ။ Mi9flagship မှာတော့ Xiaomi ဟာ main camera အတှကျ “sapphire glass” သုံးပေးထားတယျလို့ ကွညောထားပါတယျ။ ဒါဟာ JerryRigEverything အတှကျတော့ စိနျချေါမှုတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဖုနျးရဲ့ အစိတျအပိုငျးငယျလေးတဈခုအတှကျ ဈေးကွီးတဲ့ပစ်စညျးကို ဘာကွောငျ့သုံးရမှာလဲ။ ဒီနခေ့တျေမှာ ကငျမရာတှကေ ဖုနျးရဲ့ကိုယျထညျကနအေပွငျကို ထှကျနတေဲ့ပုံစံဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဖုနျးတှကေို စားပှဲပျေါတငျထားမယျဆိုရငျ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ထိခိုကျမှုရှိနိုငျပါတယျ။ ခွဈရာပှနျးရာတှဟော Lens ထဲကို အလငျးဝငျမှုအပျေါ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိနိုငျတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူတို့ကို ကွံ့ခိုငျအောငျ လုပျဆောငျပေးထားတယျလို့ မွငျရမှာပါ။ ဆိုလိုတာက ကငျမရာရဲ့ အရညျအသှေးကို ကာကှယျခငျြတာပေ့ါ။
Xiaomi ဟာ ကငျမရာအတှကျ sapphire ကို ပထမဆုံးအသုံးပွုခဲ့တဲ့လုပျငနျးတော့ မဟုတျပါဘူး။ Apple လညျး သုံးခဲ့ဖူးပါတယျ။ JerryRigEverything အနနေဲ့ sapphire သုံးထားတဲ့ဖုနျးတှကေို စမျးသပျပွခဲ့တာလညျး မနညျးတော့ပါဘူး။ Xiaomi အလှညျ့မှ ထူးပွီးလုပျဆောငျတာမြိုးမဟုတျတော့ စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ကွညျ့လို့ရပါတယျ။
စမျးသပျမှုအရဆိုရငျ Xiaomi ရဲ့ “sapphire glass” ဟာ sapphire ဆိုတာထကျ ဖနျသားပိုဆနျပါတယျ။ level6မှာ အစငျးရာထငျသှားပွီးတော့ level7ကို မခံနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ sapphire နဲ့ glass ကို ရောနှောထားတယျဆိုတာ မွငျလိုကျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး လုံးဝလိမျညာခဲ့တာတော့ မဟုတျပါဘူး။
သတငျးကောငျးကတော့ Xiaomi Mi9ဟာ စမတျဖုနျးဈေးကှကျထဲမှာ ဈေးအသကျသာဆုံးဖွဈပွီးတာ့ ကွံ့ခိုငျမှုအရှိဆုံးလို့လညျး ပွောရမှာပါ။ သူ့ဈေးတနျးနဲ့ပေ့ါ။ အဲဒီဈေးမှာကို အခကျြအလကျအမွငျ့တှလေညျး သုံးပေးထားပါတယျ။ အားနညျးခကျြကတော့ ဒီနခေ့တျေ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ စမတျဖုနျးတှလေိုပဲ headphone jack ဖွုတျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ microSD storage ကိုတော့ အသုံးပွုနိုငျဦးမှာပါ။
Posted on September 12, 2018 Author Ko Nyi
Apple ရဲ့ iPhone Event ပြီးတာနဲ့ ဟွာဝေးက လှောင်ပြောင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ Huawei က တွစ်တာ အကောင့်မှာ “Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 “ လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ iPhone အသစ်များဟာ အဟောင်းနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ Troll လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ Mate 20 Series များကို ကြေညာမယ်လို့လည်း ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ ပို့စ်မှာ ဗီဒီယို တစ်ခုလည်း ထည့်သွင်းထားပြီး ဗီဒီယိုမှာ “beyond consistency”, “beyond horizon”, “beyond intelligence” လို့ […]
စမတ်ဖုန်းများဟာ အိတ်ဆောင် ကွန်ပြူတာငယ်လေးများလို အစွမ်းထက်လာကြပါပြီ။ ဖုန်းများကနေ အင်တာနက်မှ ဗဟုသုတများ လေ့လာနိုင်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များမှာ သူငယ်ချင်းများ ရှာဖွေနိုင်ခြင်းများကြောင့် လူတွေဟာ စမတ်ဖုန်းကို စွဲလမ်းစွာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ လူကြီးများသာမက ကလေးများဟာလည်း စမတ်ဖုန်းကို စွဲလမ်းစွာ သုံးလာကြပါတယ်။ အခုတော့ စိတ်ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Dr Jon Golding က အသက် ၁၁ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးများအား ဖုန်း ပေးမသုံးသင့်ကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်များဟာ ကလေးများအား စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစေခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။ အသက် ၈ နှစ်နဲ ၁၁ အကြား ကလေးငယ် ဆယ်ဦးမှာ လေးဦးဟာ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နေပါတယ်။ […]